Ibsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waliigalaa Irraa kenname – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIbsa Ejjennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waliigalaa Irraa kenname
Ebla 30, 2020, Finfinnee Oromiyaa
QBO Qabsoo Bilisummaa Oromoo hanga har’aa adeemsifamaa jiru keessatti aarsaa gurguddaa kaffalaa as ga’uun isaa ifa jira. Hattuu Qabsoo Bilisummaa Oromoo harkaafi gurra micciiruun sirreessaa, guca Bilisummaa Gootawwan kaleessa qabsiisan irratti of qusannaa tokko malee lafee isaa cabsee, lubbuu tokkittii qabu saba isaaf aarsaa gochaa tiksee har’aan ga’ee jira. Haa ta’uutii bu’aa ba’ii kana keessatti, gufuuwwan daandii qabsoo Bilisummaa Oromoo heedduun isa mudatus, harka kennee otoo hin taa’iin falmaatti jira. Bu’aa ba’iiwwan jiran keessatti dantaa dhuunfaa isaaniif jecha, Qabsoo saba kanaa warri maallaqatti sharafanis ni argamu. Adeemsonni akka kanaa QBO kan abdii hin murachiifneefi abdii hin kutachiisne ta’uus QBO bareechee beeka. Kanneen Qabsoo saba kanaatti gufuu ta’aa dhufan Seenaan kan isaan hin dhiifne ta’uufi QBOs gatii isaaniif malu kaffalaafii dhufe, ammas itti fufinsaan cimsee ni kaffalaaf. Dhimmi wal xaxaafi burjaajessaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti oofamu kamuu bilchinaan ilaalamuu akka qabu Qeerroon cimsee hubachiisa.
Ijaarsa QBO karaa qindaa’aa ta’een hojjetamee Warraaqsa Bilisummaa Oromoo dhoose, kaayyoofi akeeka taliigameef bira otoo hin ga’iin karaa maquu isaa namuu quba qaba. Namoonni dhuunfaa kal’ee sabboonummaa uffachuun QBO afaan faajjessaa, sakaalaa turan har’as waan jiraniif QBO adeemsa isaanii ija mirgaan irraa siqee ilaalaa jira. Keessattuu namoonni dhuunfaa Mootummaa kana jala kaataniifi qaama mootummaa gabroonfataa ta’anii saba keenyattis QBOttis afaan faajjii uumuun olaantummaa siyaasaa gonfachuuf yaaliin taasifamaa jiru kan jiru ta’ee, QnBO jarreen akkanaa kun saba keenyatti burjaajii ta’uu akka hin qabne cimsee hubachiisa. PP keessatti kanneen mallattoon sabboonummaa kennemuufii yaalamaa jiru kanneen akka Ob.Lammaa Magarsaa yeroo mara dammaqinaan hordoffii feesisa. Haala keessa dabarree as geenye iraas ta’u haala qabatamaa itti jiran irraa ka’uun namni kun deggeraafi Qabsaa’aa Bilisummaa Oromoo fakkaatus, kan hin taane ta’uufi ammas gara fuula duraatti afaan faajjii gama sanaan dhufuuf deemu damdamannee daandii Xurree Jaallewwan dhiigaan baasan irraa akka hin gorres gad jabeessinee dhaamna. Lammaan Qabsoo Oromoo hin ganne, Lammaan nu waliin jira… jechaa saba kanatti afaan faajjii uumamuuf burjaajiin hawwitoota dantaa dhuunfaa ofii guttachuuf ifaajaan Qeerroon afaan faajjii kanarra akka dhaabbatan gad jabeesse dhaama. Kaleessa Qabsoon Bilisummaa Oromoo ciniinsuun afaan gadameessaa irra ga’e kan garaatti akka ol deebu taasise adda durummaan Lammaa Magarsaafi Jawaar Mohaammad ta’uun beekamaadha. Hawaasa keenya keessa fiiguun “faashinni qawwee hafeera, qawwee gataa” jechuun uummata keenya balaa hin eegamneef saaxilaa turuun jara kanaa ifa jira. Akka fakkeenyaatti kaasuuf Jawaar Mohaammed Wallootti imaluun, “Qawwee gataa Obbolaa keessan Amaara waliin nagaan jiraadhaa” jedhee battala Finfinneetti deebi’een Ilmaan Walloo Ilmaan Nafxanyaan haadhamuu hunduu quba qabna.
Jarreen kun saffisa hiree murteeffannaa Oromoo fiigaa ture laaffisuun, karaa iira akka turu taasisanis Hiree Murteeffannaan Uummata Oromoo akka hin oolle QBO ni amana, gadi jabeessees ni hojjeta. Kanaaf har’a QBO jaallattootaafi deggertoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo maraaf irra deebiin waamicha ni dhiyeessa. Haaluma kanaan:-
Abbootiin Qabeenyaa Oromoo biyya keessaafi biyya alaa jirtan, maallaqa qabdaniin QBOfi WBO bira dhaabbachuun hiree Murteeffannaa Oromoo saffisiisaa!
Hayyoonni Oromoo, beekumsaafi dandeettii qabdaniin hirmaannaa QBOn Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti taasisuufi WBO tumsuun tooftaafi deemsa Qabsoo keenyaa Saayinsiin deggeruun gurra Addunyaa biraan nuuf ga’uun Qabsoo Bilisummaa Oromoo cina akka dhaabbattan waamicha isiniif goona!
QBO bu’aa ba’ii heedduu keessa tartanii aarsaa jajjaba kaffalaa as geessanii, har’a garuu burjaajii adda addaa keessa seentan, dhaabbattanii of ilaaluun gara Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo duraan keessa turtaniitti deebi’uun dursa faayidaa saba keessaniif akka dhaabbattan waamicha isiniif goona!
Aartitoonni keenya, keessattuu, Weellistoonni keenya Warraaqsa Uummataa yeroo darbee keessatti shoora hin laakkaa’amne taphachuu keessan diinaaf firatu beeka. Haa ta’uutii garuu yeroo dhiyootii asitti gama keessaniin wanti argamaa jiru QBOs,Saba keenyas gaddisiiseera. Yoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo deggeruun gara fuula duraatti dhiibuun isinitti ulfaate, gufuu akka nutti hin taane kabajaafi dhiiga Qabsaa’ota jigeen isin qabnee nurraa taa’aa!
Hojjettoonni mootummaa manneen hojii mootummaa gara garaa keessatti argamtan sabboonummaafi quuqama sabaa qabdan deggersa Qabsoo Bilisummaa Oromoof gootan cimsitanii akka itti fuftan waamicha isiniif goona!
Ilmaan Oromoo miseensa waraana mootummaa gabroomfataa kana keessaa jirtan, kaayyoo sirni kun Oromoofi Oromiyaa diiguuf qabatee abidda laboobaatti isin oofaa jiru bilchinaan dhaabbattanii ilaaluun gara mooraa qabsoo bilisummaa oromootti akka deebitan Qeerroon Bilisummaa Oromoo gadi Jabeesse Waamicha isiniif dhiyeessa.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Qaama Waraaqsatti amanu, qaama Saba Oromoo Bilisummaa isaa gonfachiisuuf qawwee kaasee Bosona jiru deggeruun Jaarmiyaa Bilisummaa Oromoof of kennee falmaa gubbaa jirudha. Qaamonni Qeerroo Nagaafi Qeerroo Haaromsaa ijaarra jechuun Qeerroo Bilisummaa Oromootti maqaa gara garaa moggaasuun diigumsaaf sochiitti jirtan adeemsa qabsoo Bilisummaa oromoo keessaa harka keessan fudhadhaa!
QBO qaama Qabsoo Bilisummaa Oromootti gufuu ta’u hunda irratti tarkaanfii amansiisaafi barsiisaa ta’e fudhataa jira, cimsees ittifufa.
Namoonni dhuunfaa Mooraa Qabsoo Bilisummaa oromoo keessa mataa dhokfachuun Qabsoo Bilisummaa Oromoo karaa maqsuuf diina waliin hojiitti jirtan nurraa dhaabbadhaa!, ta’uu baannaan QnBO bukoo keessan sabatti ifa gochuun tarkaanfii isiniif malu itti aansa.
Waraana naamuusaafi sansakkaa mooraa Qabsoon ala socho’uun dhimma dhuunfaa irratti bobba’an QBO cimsee ni balaaleffata. Qophii WBO, Nyaataafi Dhugaatii WBO akkasumallee bakka da’annaa WBO akkaataa hin malleen Miidiyaa hawaasaa irra oofuun hawaasa WBOn keessa socho’u irratti akkasumallee deggertoota WBO irratti miidhaa jajjabaa geessisaa waan jiruuf, itti fayyadama Miidiyaa Hawaasaa akka malee ta’e ni balaaleffanna,naamusa moora qabsoo bilisummaa oromoo waan hin taanefilleen miseensoonni WBO dhimma kana akka gad jabeessanii ilaalan ni hubachiisna.
Namoonni dhuunfaa hanqina hubannootiin akkasumallee fedhiifi jaalala WBO irraa qabnuun Qophii WBO akkaatuma jiruun qilleensa irra oofaa ooltan dhaabbadhaa of ilaalaa. Gochi akkanaa farra qabsoo keenyaa ta’uu isaa irraa kan ka’e cimsinee balaaleffanna, tarkaanfiin gitaas itti aana.
Dhaabbileen mootummaas ta’e dhuunfaa sochii QBOs ta’e sochii WBO dura dhaabbate kamiifuu araarama tokko malee QBOtiin ni adabama.
Dhaabbanni ijaarsi isaa ilmaan naafxaan ta’e kan maqaa “Gaallaa Gadaay’’ jedhamuun waggoota kurna lama dura hundeeffame har’alleen Oromiyaa bakka adda addaatti hidhannoo bitee kuusuun egeree Oromoof Oromiyaatti dukkana hammaataa uwwisuuf sarara dheeraa diriirfachuun hojii jabduutti jiru waliin Oromoo taatani kan waliin hidhataafi shaarika qabdan, dabrees meeshaa waraanaa itti gurguruun kan nurratti goobsaa jirtan hatattamaan akka harka keessan sassabbattan isin akeekkachiisna.
Murnoonni gita bittaa Nafxanyaa abbaa Irree jala hiriiruun, diigumsa tokkummaa Oromoo irratti bobbaatanii jirtan, akkasumallee faayidaa hin malleen Qeerroo Oromoo karaa maqsaa jirtan Dogoggora seenaa hamaa keessatti of ilaaltanii hatattamaan akka of sirreessitan isin hubachiifna!
Walumaa galatti QBO qaama Warraaqsaan Bilisummaa Oromoofi Walabummaa Oromiyaa mirkaneessuuf socho’u dha. Kana ta’uu hubachuun QBO qaamoleen dhuunfaafi Mootummaa gargar si hirachuuf maqaalee Qeerroo Nagaafi Qeerroo Haaromsaa jedhuun sochii keessa kan jiramu QBO kan hin ilaallanneefi bakka kan nu hin buune ta’uu haalaan hubachuu feesisa.
QBO Jaarmiyaa mataa isaa danda’e, akkuma kaleessa Wayyaanee fincilee ari’e, har’as sirna bittoota Nafxanyaa mootummaa abbaa irree waraanatti amanu kana finciluun hiree Oromiyaan Ofiin of bulchuu qabduuf falmaa isaa cimsee itti fufa.
Ebla, 2020, Finfinnee Oromiyaa